Iran: Ny kanto sy ny Fanomezana endrika amam-bika ny ‘Hetsika Maitso – Green Movement’ · Global Voices teny Malagasy
Iran: Ny kanto sy ny Fanomezana endrika amam-bika ny ‘Hetsika Maitso – Green Movement’
Voadika ny 29 Septambra 2010 8:08 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, Nederlands, বাংলা, Italiano, اردو, polski, Español, 简体中文, 繁體中文, македонски, English
.”Aiza ny vatom-pifidianako” dia fampirantiana iray ahitana afisy lehibe miresaka politika miisa 150 nataon'ny Hetsika Maitso ao Iran izay naranty tao amin'ny Sekolin'ny Kanto azon'ny maso jerena – School of Visual Arts ao New York (30 Aogositra – 25 Septambra) ary nandraisan'ireo mpanakanto maro maneran-tany ( io ambony io ny asa famoronan'i Yossi Lemel) ho fanohanana ny hetsi-panoherana any Iran taorian'ny fifidianana izay ho filoham-pirenena tamin'ny 2009. Mbola haranty any Boston daholo koa ireo asa famoronana rehetra ireo amin'ny Novambra.
Ny maha-mponin'ny aterineto, ny fitorahana bilaogy ary ireo mpitoraka bilaogy an-tsray mafàna fo no isan'ny toko nahamasa-nahandro tamin'ity hetsika ara-javakanto iraisam-pirenena ity.
John Wyszniewski, Tale mpanampy misahana ny Fifandraisana avy ao amn'ny School of Visul Arts ao New York dia nanambara tamin'ny Global Voices tamin'ny alalan'ny mailaka fa:
Taorian'ny fifidianana tany Iran ny lohataona 2009, dia nanentana ny mpanao sary rehetra eran'izao tontolo izao ny mpaka sary Iraniana iray fantatra amin'ny anarana hoe Green Bird mba hamorona afisy lehibe ho fanohanana ny Hetsika Maitso ao Iran. Ny iray tamin'ireo mpanakanto natoniny, ilay italiana mpanome endrika amam-bika Andrea Rauch, dia nanolotena handray ireo afisy rehetra tao amin'ny vohikala SocialDesignZine, izay bilaogin'ny Fikambananan'ireo Grafista Italiana, izay i Rauch no tonian-dahatsoratra. Maherin'ny 200 ireo afisy voaray tao amin'ilay vohikala ary azo tsidihana / jerena.
Wyszniewski dia mizara ampahany amin'izay voasoratra tao anatin'ny mailaka avy amin'i Green Bird:
Ary dia ity ny ampahany amin'ny iray tamin'ireo mailaka nalefan'i Green Bird:
“Manao ahoana ianao izay ry namako? Antenaiko fa salama tsara. Tena malahelo aho noho ny fisian'ny olona maro maty teto Iran tato anatin'ny andro vitsivitsy ( taorian'ny fifidianana teto Iran). Be ny zatovo lahy sy vavy maty tato anatin'ny andro vitsy. Mirotsaka ny ranomasoko. Olana iraisam-pirenena ankehitriny ny zava-mitranga eto Iran. Raha ny hevitro, tokony hiditra hanohana ity hetsika ity ireo mpanakanto malaza eran-tany. Goavana amin'ny fanaingoana an,-tsary ianao. Miangavy mafy anao aho mba hamorona afisy ho fanohanana io hetsika io Ho Iraniana tahaka ahy ianao amin'ireo andro ireo. Tahaka ahy ianao ka dia mba ampio aho amin'izay làlana izay (Green Movement).”
Tany anatin'ireo mailaka nalefany i Green Bird dia nizara ny sary nalainy avy amin'ireo hetsi-panoherana Iraniana mba ho hitan'ny tontolo ivelany koa.
Any amin'ny farany i Wyszniewski dia milaza ireo hevi-baventy tena fototry ny «Kanto Maitso» : ” Firaisankina, Hetahetam-pafahafana, Famadihana [Avy amin'ny mpandika : famadihan-tanindrazana angamba no tiana ho lazaina], ary ny Fanantenana”
Tantaran'ny Fahalalahàna miteny farany
Azia Afovoany sy Kaokazy 8 ora izay